WordPress Development (Burmese - မြန်မာ) | Udemy
WordPress Development (Burmese - မြန်မာ)
ကိုယ်ပိုင် Website တစ်ခုကို Code တစ်လုံးမှ မရေးပဲ အချိန်တိုအတွင်း ဖန်တီးလိုသူများအတွက်
Created by Minn Khant Naing
Good Knowledge of Managing Themes & Plugins
Understand Effective Use of Tools & Settings
Add, Update & Delete Users on WordPress
2 sections • 19 lectures • 2h 54m total length
Installation of WordPress3 lectures • 19min
Login To WordPress Dashboard Via URL
WordPress Fundamentals16 lectures • 2hr 36min
Settings - Writing, Reading & Discussion
Settings - Media, Permalinks & Privacy
Users - All Users, Add New & Profile
Posts - All Posts, Add New & Edit
Posts - Categories & Tags Management
Appearance - Customize - Typo, Color & Breadcrumb
Appearance - Customize - Blog, Sidebar & Footer
Appearance - Customize - Menus, Widgets, Homepage Settings & Additional CSS
Plugins - Plugins, Install, Activate & Delete
ဒီ သင်တန်းဟာ Udemy ပေါ်မှာ WordPress ကို မြန်မာဘာသာနှင့် သင်ကြားပေးထားတဲ့ ပထမဦးဆုံးနှင့် တစ်ခုတည်းသော သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသင်တန်းမှာ WordPress ကို အခြေခံကနေ စပြီး မိမိဖန်တီးလိုတဲ့ Website တစ်ခု ဖန်တီးနိုင်ယူသည်အထိ တတ်မြောက်အောင် သင်ကြားပို့ချထားပါတယ်။ WordPress မှာ ပါတဲ့ Settings တစ်ခုချင်းစီကို အသေးစိတ်ရှင်းလင်းပေးထားတာကြောင့် WordPress Setting ကို ထိရောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ WordPress ရဲ့ အရေးအကြီးဆုံး အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Plugins နှင့် Themes တို့ကိုလည်း နားလည်အောင် အခြေခံကနေစပြီး ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။ WordPress နဲ့ပတ်သတ်ပြီး သိသင့်သိထိုက်တာလေးတွေကိုလည်း ထည့်သွင်းပြောပြပေးထားပါတယ်။ Server (သို့) Hosting ကို Manage လုပ်တဲ့ cPanel ကို အသုံးပြုပြီး Softaculous Software မှ WordPress Project Install လုပ်ပုံကိုလည်း သေသေချာချာ သင်ပြပေးထားပါတယ်။ နောက်ပိုင်း သင်ခန်းစာအသစ်တွေကို ဖန်တီးပြီးတော့လည်း ဒီသင်ခန်းစာထဲမှာ ထပ်ပေါင်းထည့်ပေးသွားဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသင်ခန်းစာကို အပိုင်း (၂) ပိုင်း ခွဲထားပါတယ်။ WordPress ကို cPanel မှာ Softaculous Software ကို အသုံးပြုပြီး Install လုပ်တဲ့ အပိုင်းရယ်။ WordPress Fundamentals ရယ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ WordPress Fundamentals မှာ WordPress Features နဲ့ Function တစ်ခုချင်းစီရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံတွေ၊ သူတို့ကို ဘယ်လိုအချိန်မှာ အသုံးပြုစရာမလိုပဲ၊ ဘယ်လိုအခြေအနေမှာ အသုံးပြုရမယ်ဆိုတာတွေ၊ လက်တွေ့လုပ်ပြထားပါတယ်။ Udemy က Discount ပေးထားတဲ့ အချိန်တွေမှာ ဒီ Course ကို ဝယ်ထားလိုက်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ Course က Lifetime ဝင်ကြည့်လို့ရမှာ ဖြစ်ပြီးတော့ နောက်လည်း သင်ခန်းစာ အသစ်တွေကို မကြာမကြာ ထည့်ပေးသွားမှာ ဆိုတော့ ပိုတန်တာပေါ့။
၁။ cPanel ထဲကို Login ဝင်နည်း
၂။ cPanel မှာ ပါဝင်တဲ့ Softculous ဆိုတဲ့ Software ကို အသုံးပြုပြီး WordPress ကို Install လုပ်နည်း
၃။ သက်ဆိုင်ရာ URL ကို အသုံးပြုပြီး WordPress Dashboard ကို Login ဝင်နည်း
- Settings ကို အပိုင်း (၃) ပိုင်းခွဲပြီး ရှင်းပြထားပါတယ်။
၄။ Settings ထဲမှာပါတဲ့ General အကြောင်း
၅။ Settings ထဲမှာပါတဲ့ Writing, Reading နဲ့ Discussion အကြောင်း
၆။ Settings ထဲမှာပါတဲ့ Media, Permalinks နဲ့ Privacy အကြောင်း
၇။ WordPress Tools တွေအကြောင်း
၈။ User အသစ်ထည့်ခြင်း၊ Edit လုပ်ခြင်း၊ Delete လုပ်ခြင်း၊ Role ပြောင်းခြင်း
- Post ကို သင်ခန်းစာ နှစ်ခုခွဲပြီး ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။
၉။ Post တင်ခြင်း၊ Edit လုပ်ခြင်း၊ Delete လုပ်ခြင်း၊ Post တွေကို စီမံ ခန့်ခွဲခြင်း
၁၀။ Post တွေနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ Categories တွေနဲ့ Tags တွေကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း
၁၁။ Images, Videos, Files, etc. တို့ကို Store လုပ်တဲ့ Media Library အကြောင်း
၁၂။ ကိုယ့် Post (သို့) Custom Post Type တစ်ခုခုမှာ လာရေးတဲ့ Comments တွေကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း
၁၃။ Home, About, Contact, etc. တို့လို Page တွေကို ကိုယ်လိုချင်သလို ထည့်ခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်း
- အရေးအကြီးဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့ Appearance အကြောင်းကို အပိုင်း (၄) ပိုင်းခွဲပြီး ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။
၁၄။ Appearance ထဲက Themes အကြောင်း
၁၅။ Appearance မျာပါဝင်တဲ့ Customize ထဲက Typo, Color နဲ့ Breadcrumb အကြောင်း
၁၆။ Appearance မျာပါဝင်တဲ့ Customize ထဲက Blog, Sidebar နဲ့ Footer အကြောင်း
၁၇။ Appearance မျာပါဝင်တဲ့ Customize ထဲက Menu, Widgets, Homepage Settings နဲ့ Additional CSS အကြောင်း
၁၈။ WordPress ရဲ့ Functions တွေကို စီမံခန့်ခွဲရာမှာ အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ Plugin ကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း
၁၉။ WordPress အသုံးပြုသူတွေ သတိမထားမိတဲ့ Screen Options အကြောင်း
၂၀။ ဒီသင်တန်းထဲမှာပဲ နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေကို ထည့်ပေးပါဦးမယ်။
ဒီ Course မှာ နောက် ထပ်ထည့်မယ့် သင်ခန်းစာတွေကတော့ WordPress ကို Web Hosting ဝယ်စရာမလိုပဲ ကိုယ့် Computer ပေါ်မှာ Local Environment တည်ဆောက်ပြီး Develop လုပ်ခြင်း၊ ပြီးတော့ ကိုယ်ပိုင် Blog တည်ဆောက်နည်းကိုလည်း အစကနေ အဆုံးထိ Project တစ်ခုလုံး လုပ်မယ့် Section တစ်ခု ထပ်တိုးပါမယ်။
Minn Khant Naing
I am an experienced WordPress developer. I have been developing WordPress websites from agriculture to eCommerce websites for my clients in recent years. Online WordPress courses have also been provided on the other learning platforms in Burmese. Afterafew suggestions, I have decided to bring my tutorials to Udemy.